सवारी साधन अनुमतिपत्र भएपनि अनुभव नभएका मान्छे विदेश जाँदा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
Sun, Aug 09, 2020 | 23:53:02 NST
प्रश्न : मैले हलुका सवारीसाधनको अनुमतीपत्र लिएको छु । तर मैले ड्राईभिङ चाहिँ गरेको छैन । यत्ति सीपका भरमा मैले विदेशमा गएर काम गर्न सक्छु कि सक्दिन ?
उत्तर :सोमलाल बाटाजु, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - यो सारै आलोकाँचो काम भयो । तपाईंसँग लाइसेन्स भएपनि काम नगरेपछि त्यसमा पर्याप्त अनुभव छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।
खाडी मुलुकमा चल्ने गाडीको गति र सिस्टम हेर्नुभयो भने त्यो एकदमै कठिन छ । तपाईंले अनुभव बटुलेर मात्रै ती देश जाँदा तपाईं र तपाईंको भविष्य दुवै सुरक्षीत हुन्छ । त्यसैले अल्प ज्ञान लिएर तपाईं विदेश जाने भन्दा पनि राम्रोसँग ज्ञान लिएर मात्रै जानुस भन्ने मेरो सुझाव हो ।